Fitaovana GNU / Linux: Orinasa sy solosaina misy GNU / Linux ao anaty boaty | Avy amin'ny Linux
Nandritra ny fotoana ela, iray amin'ireo faniriana lehibe, nofinofy na hetahetan'ny mpampiasa na mpikambana ao amin'ny Rindrambaiko maimaim-poana, loharano misokatra ary vondrom-piarahamonina GNU / Linux, antsika ve izany Rafitra miasa na fizarana (Distros) mitana isan-jato tsara amin'ny pie, raha ny Rahavavy miasa ampiasaina amin'ny solosaina, na desktop na laptop.
Ary vaovao marobe amin'ity lafiny ity no nitombo, na dia mbola ambany dia ambany aza ny isan-jato. Araka ny vavahady NetMarketShare, ao amin'ny 12 volana lasa izay ny isan-jato dia natao ho an'ny 2.18%, raha mandritra ny volana Jona 2020, dia hita ao 3,61%, izay midika fironana kely fitomboan'ny GNU / Linux amin'ny Desktop solosain'ireo mpampiasa, amin'ny ankapobeny.
Ho fanampin'izay, ireo metrika tsara asehony NetMarketShare amin'ny GNU / Linux amin'ny solosaina dia ilaina ny manatratra fironana maharitra sy azo itokisana amin'ny fotoana isan'andro isan'andro mametraka orinasa ny orinasa, samy amin'ny solosaina birao sy solosaina findainy, tsy mitovy GNU / Distros Linux, tompony na vondrom-piarahamonina, novainaina ary namboarina tsara mba hahombiazana tsara indrindra amin'izy ireo.
Amin'izany fomba izany, afaka manolotra tena tsara fanohanana aorian'ny fivarotana, raha ilaina, ho an'ny a fahafaham-po amin'ny mpampiasa ambony, vaovao na tsia, an'ny GNU / Linux.
1.1 Orinasa manana solosaina sy orinasa GNU / Linux napetraka
1.2 Voamarina eo ambanin'ny programa RYF
1.3 Ny hafa tsy tafiditra ao anatin'ny programa RYF
Mikasika an'io teboka io, araka ny efa nolazainay teo amin'ny famoahana teo aloha izay nantsoina "Fandaharam-pianarana fanamarinana vokatra Hardware: hajao ny fahalalahanao", misy ankehitriny ny programa fanohanana tena tsara izay mikasa ny hampandroso ny tanjona.
Manonona ity lahatsoratra ity, ampianay izao manaraka izao:
"Ny programa mari-pahaizana momba ny vokatra lozisialy Free Software Foundation (FSF) antsoina hoe "respects your Freedom" (RYF) dia manolotra mari-pankasitrahana ofisialy sy marika azo aseho amin'ny fitaovan'ny fitaovana mety aminy. Ity programa ity dia mandrisika ny famoronana sy ny fivarotana fitaovana izay manome lanja ny fahalalahana sy ny fiainantsika manokana ary ny fibaikoana azy avy aminay, ireo mpampiasa (mpanjifa)".
Ary koa, ao amin'ny tranokala ofisialy an'ity programa ity RYF avy amin'ny FSF, afaka mahazo lisitra kely nefa mahafinaritra ianao Fitaovana mifanaraka sy voamarina, indrindra ny solosaina Workstation, Servers ary solosaina finday amin'ny GNU / Linux, ary efa napetraka aza.
Orinasa manana solosaina sy orinasa GNU / Linux napetraka
Voamarina eo ambanin'ny programa RYF
Fahalalahana: Orinasa teknolojia misy famatsiam-bola ao amin'ny R&D sy ny solo-sain'izy ireo manokana, any New Jersey, Etazonia.
Vikings: Orinasa fampiantranoana tranonkala maimaim-poana, izay miorina 100% amin'ny rindrambaiko boot maimaim-poana, serivisy maimaimpoana ary ampiasain'ny angovo maitso voamarina ny serivisin'izy ireo. Ho fanampin'izay, manana fivarotana an-tserasera izy ireo izay anolorany mpizara sy toeram-piasana maimaimpoana. Ny foibeny dia ao Aachen, Alemana.
TechnoEthical: Orinasa mpivarotra miasa amin'ny fivarotana an-tserasera mivarotra fitaovana mifanaraka amin'ny Operating Systems izay manaja tanteraka ny fahalalahan'ny mpampiasa, araka ny voafaritry ny Tetikasa GNU. Ny foibeny dia ao Bucarest, Romania (Vondrona eropeana).
Ny hafa tsy tafiditra ao anatin'ny programa RYF
Ary farany nefa tsy azo tsapain-tanana, tsara ny manamarika fa tian'ireo goavambe teknolojia sasany Dell y HP, azon'izy ireo antoka Fandaharana mivarotra solosaina miaraka amin'ny GNU / Linux ao anaty boaty, Raha ny hafa Goavana teknolojia, natokana bebe kokoa na ho an'ny Mpizara Linux. Saingy izy rehetra ireo dia mandray anjara amin'ny fasika iray mba handresena ny Desktop an'ny mpampiasa, amin'ny ankapobeny.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny tolotra ankehitriny an'ny Computer Hardware (PC) miaraka amina orinasa GNU / Linux napetraka, avy amina orinasa ara-barotra mitombo isa; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fitaovana GNU / Linux: Orinasa sy solosaina misy GNU / Linux tsy hita ao anaty boaty
Misaotra betsaka anao nanonona anay.